Booliska Dalka Sweden oo Weli Baaritaan Adag ku Wada Dilkii Wiilasha Soomaalida (VIDEO) - iftineducation.com
Booliska Dalka Sweden oo Weli Baaritaan Adag ku Wada Dilkii Wiilasha Soomaalida (VIDEO)
iftineducation.com – Waxaa isi soo taraya tuhunno muujinaya in dilkii habeenkii Jimcaha ka dhacay magaalada Stockholm ee dalka Sweden ee loo geystay labo wiil oo walaalo ah ay ka danbeeyaan kooxo dhalinyaro oo isla Soomaali ah oo uu horey dagaal uga dhex qarxay.
Dilka wiilashan ayaa ka dhacay maqaayad yar oo shaaha laga cabo oo ku taala xaafadda Ajaanibtu iyo Soomaalida ku badan tahay ee Rinkeby oo ku taala banaanka magaalada Stockholm.
Ragii dilka geystay ayaa la sheegayaa inay ku hubeysnaayeen qoryaha darandooriga u dhaca iyo weliba Bistoolad sida warbaahintu sheegayso, waxaana ay rasaas ku fureen dadkii meesha fadhiyey, halkaas oo labada wiil isla markiiba ku geeriyoodeen.
Booliska ayaa wada baaritaan weyn oo lagu baadigoobayo ragii dilka ka danbeeyey, waxaana la sheegayaa in ay ahaayeen laba ilaa afar nin oo da’oodu u dhaxayso 20-25 jiro, waxaana ay goobta kaga baxsadeen gaari caddaan ah sida Boolisku sheegeen.
Qaar kamid ah warbaahinta dalka Sweden ayaa sheegaysa in ay dhici karto in falkani la xiriiro kooxo iska soo horjeedo oo horey qilkaaf ugu dhexmaray isla xaafadda ay Soomaalida ku badantahay ee Rinkeby.
Sacuudiga oo ku xukumay dil 15 Shiica ah kadib markii lagu eedeeyay inay u basaasayeen Iran
Daawo La Yaabka: Nin Ugaadhsade ah oo FEEDH la Dhacay Xayawaan-ka Loo yaqaan Kanguruu-ga,